Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan "Sql Server La Ogaaday Khalad I / O ah oo ku-saleysan caqli-gal: Bog Torn "
Bogga ugu weyn Products DataNumen SQL Recovery Sql Server La Ogaaday Khalad I / O ah oo ku-saleysan caqli-gal: Bogga Torn
Markaad ku lifaaqeyso keydka macluumaadka .MDF gudaha SQL Server, waxaad aragtaa fariinta qaladka soo socota:
SQL Server la ogaaday qaladka I / O ee ku saleysan macquulnimada: bogga la jeexjeexay (saxiixa la filayo: 0x ########; saxeexa dhabta ah: 0x #######). Waxay dhacday inta lagu gudajiray akhrinta bogga (#: #) ee keydka aqoonsiga xogta # # offset ### feyl 'xxxx.mdf'. Fariimo dheeri ah oo kujira SQL Server log log ama nidaamka dhacdo log ayaa laga yaabaa inay bixiso faahfaahin dheeraad ah. Tani waa xaalad qalad aad u daran oo khatar ku ah sharafta macluumaadka waana in si dhakhso leh loo saxaa. Dhameystir jeeg isugeynta keydka xogta oo dhameystiran (DBCC CHECKDB). Khaladkan waxaa sababi kara arrimo badan; wixii macluumaad dheeraad ah, eeg SQL Server Buugaagta khadka tooska ah.
halka 'xxx.mdf' uu yahay magaca faylka MDF ee la galo.
Mararka qaarkood adiga xogta .MDF ayaa si guul leh loogu lifaaqi karaa. Si kastaba ha noqotee, markaad isku daydo inaad fuliso bayaanka SQL, sida
KA XUL * * KA [TestDB]. [Dbo]. [Test_table_1]
sidoo kale waxaad heli doontaa farriinta qaladka kor ku xusan.
Xogta ku jirta faylka MDF waxaa lagu keydiyaa sida bogag, bog walbana waa 8KB. SQL Server wuxuu adeegsadaa laba hanaan si loo hubiyo isku xirnaanta iyo is dhexgalka xogta ku jirta bogga, taas oo ah, jeegagga ama bogga jeexan. Labaduba waa ikhtiyaari.
If SQL Server wuxuu helayaa bogagga jeexjeexan qaar ka mid ah bogagga xogta inay yihiin kuwo aan ansax ahayn, markaa waxay soo sheegi doontaa qaladkan
SQL Server 2005 Khalad5_1.mdf Khalad5_1_fixed.mdf
SQL Server 2008 R2 Khalad5_2.mdf Khalad5_2_fixed.mdf
SQL Server 2012 Khalad5_3.mdf Khalad5_3_fixed.mdf
SQL Server 2014 Khalad5_4.mdf Khalad5_4_fixed.mdf